Imidlalo yokugcina yePSL sekuyilabani lokuvika ukuhlunga nokuqeda kuTop 8 - Bayede News
Imidlalo yokugcina yePSL sekuyilabani lokuvika ukuhlunga nokuqeda kuTop 8
Kufuze ukuthi bayazincoma abakwaMultichoice abathathe izintambo kwabakwa-Absa ekutheni baxhase iligi yakuleli enkulu esibizwa ngeDStv Premiership.
Le ligi ezosongwa kusasa ngoMgqibelo ibe nezigigaba eziningi kakhulu. Ubani obazi ukuthi amaqembu amabili asesifundazweni iKwaZulu-Natal, AmaZulu FC neLamontville Golden Arrows bengabalwa namaqembu amane phezulu lokho kungumlando. Usuthu noma kuthiwa liyahlulwa emdlaweni walo wokugcina elizotholana kuwona nomkhaya balo iMaritzburg United kodwa nakanjani luzoya koyibamba e-Afrika koweCAF Champions League kokuqala emlandweni.
Kuqale isizini entsha kukhona amaqembu amathathu aqhamuka esigabeni esingaphansi lawo maqembu ITS Galaxy eyathenga isitifiketi kwiHighlands Park, ITTM yona eyathenga isitiiketi kwiBidvest Wits, kwazoba iSwallows FC yona eyaba ngompetha beGladAfrica Championship.
Kuyiwa kule midlalo nje vele iBlack Leopards isigawulwe izembe kungekhona okokuqala ukuthi iye ehlathini.
Umbango ozobe ukhona kule mpelasonto oweqembu elizoya kodlala amaplay-offs, mathathu amaqembu abhekene nalobo bunzima iChippa United, iStellenbosch neMaritzburg United.
IChippa United isendaweni ye-15 inamaphuzu angama-26, iStellies sona sinamaphuzu angama-28 kuthi endaweni ye-14 iTeam of Choice yona ibe nangama-29 endaweni ye-13.
Uma iChilli Boys (iChippa United) ingadlala ngokulinga kobe kusho ukuthi iyodlala amaplay-offs, uma inganqoba iStellies neTeam of Choice izoya kunombolo-13.
Ukunqoba kweKazier Chiefs ihlula ngamathathu kwamabili iLamontville Golden Arrows kuyinike ithemba lokuthi isangakwazi ukuthi iqede namaqembu ayisi-8 aphezulu. Okumnandi ukuthi iChiefs kumele izihlulele yona ITS Galaxy esendaweni yesi-8 uma ifuna ukuzibona ingena, nalapho kuzomele iphinde imincele iSwallows ukuthi ihlule iBaroka FC ehlezi endaweni yesi-9.
Umgadli weMamelodi Sundowns uPeter Shalulile uqokelwe kwimikomelo emibili yePremier Soccer League (PSL) ezokuba ngeSonto kusihlwa. Uqokelwe koweFootballer of the Season nowePlayer’s Player of the Season.
Ongoti bakanobhutshuzwayo abaningi bebona kunguyena ongathatha le mikomelo yomubili enze okwenziwe uzakwabo uThemba “Mshishi” Zwane ngesizini edlule oqokiwe kuyona futhi le mikomelo nakule sizini kanye noThabiso Kutumela.
Usethubeni lokuthi kushaya isonto vele usedle umhlanganiso wokushaya amagoli amaningi kule sizini, unamagoli ali-13 ubanga noBradley Grobler weSupersport United onali-16. UShalulile ngoLwesithathu ukwazile ukuvalela phakathi amagoli amabili ezakhe zibhekene neCeltic kanti noGrobler wenze esifanayo eshaya amabili ezakhe zitholene phezulu neMaritburg United.
Isiyonke imidlalo yokugcina yeDStv Premiership ihlelwe kanje
iBlack Leopards neBloemfontein Celti eThohoyandou Stadium
iLamontville Golden Arrows neStellenbosch eSugar Ray Xulu Stadium
i-Orlando Pirates neTTM e-Orlando Stadium
iChippa United neSupersport United eNelson Mandela Bay Stadium
iSwallows neBaroka eDobsonville Stadium
iMamelodi Sundowns neCape Town City eLoftus Versfeld Stadium
iTS Galaxy neKaizer Chiefs eMbombela Stadium
i Maritzburg United na-AmaZulu FC
*Yonke le midlalo izoqala libumbene elesi-3 ntambama